The Semalt Islamabad Expert Shares 2 Nzira dzekuvhara Referrer Spam Mu Google Analytics
Referral spam ndiyo nzira inonyangadza iyo inobata nzvimbo yako kubva kune zvigunun'una, sezvinonzi darodar.com, nezvimwe. Google Analytics inotsvaga kuti inotungamira kupi uye sei mashoma mashanti mutenzi anoshandisa nzvimbo yako.
Sohail Sadiq, nyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt , anopa pano mutungamiri unobatsira munyaya iyi.
Kana iwe uchigamuchira ruzivo rwekutengesa, mikana ndeyokuti vashanyi panzvimbo yako yepaiti havazombopedzi kwekamwe kwechipiri pamapeji ako uye kuwedzera kwekuwedzera kuchava kusvika ku100% - circular outdoor table and chairs. Zvinogona kugadzira zvidzoro zvinosanganisa motokari inotaurirwa kubva kune zvidzidzo zvinganetseka. Kana zvasvika pakurambidza referrers, unofanirwa kuve nechokwadi kuti uri kudzivirira maitiro anobva mumumvuri uye masware. Iwe unofanirawo kuvabvisa kubva kuGoogle Analytics account nokukurumidza. Mafurita ekutsvaga asina kushandiswa anoshanda nekufananidza mafirati ako uye otora maitiro anowanikwa muKampaign Source yako.
Referrer Spam Inoitei?
Makore maviri apfuura, mutambi weRussia anonzi Vitaly Popov akaputika mubhuku reGoogle Analytics uye akabudirira kuisa spam yake yekutsvaga imomo ikoko. Icho chaiyo URL inotungamirira kumashamba ewebhu asingazivikanwi uye haafaniri kuverengwa seyakakodzera kutumira..Haisi nguva yokutanga apo vatengesi vakaita chimwe chinhu chakadai, Alan Bush kubva kuIgnite Visibility anoti pane dzakawanda spam uye kutumira mapurogiramu anoita sangano rekutsvaga uye anotungamira mawebhusayithi kune zvisiri zvenhema SEO. Iwe unogona kubviswa kubva kumasimangara ezvemagariro evanhu, social socialmarkmarking mitanho, uye mamwe ose mashizha emhando dzemafu.
Nzira yekubvisa sei mutero spam
Nzira # 1: Wedzera Account yakasanganiswa View
Unogona kuwedzera purogiramu yekodzero yakasvibiswa kuti ibvise referrer spam. Enda kuMutungamiri> Mafaira> Mifananidzo Faira> Rudzi rweMutauro Zvisarudzo, uye gadzira zvinyorwa zvitsva uko unogona kuwedzera mawebhusayithi akawanda anotinhira sezvaunoda. Kana iwe uine maonero asina kufanana, unofanira kuwedzera kwavari kuti zviparadzanise uye usakanganwa kutumidza ma filters ako se darodar, mabhoti-kwe-website nevamwe.
Nzira # 2: Shandisa Chikamu Chechimiro
Zvinogoneka kuumba zvitsva zveMitambo Zvitsva muKutsvaga> Source / Medium section. Iyi nzira, zvakadaro, inobatsira kana iwe uchiramba uchitsvaga motokari uye nzvimbo yako yehuwandu yakarasikirwa nekuda kwayo.
Kudai iwe usina kunge uchida kushandisa nguva yakawanda kuwedzera spammers uye nzvimbo dzekutumira kune zvitsva, unogona kuenda kuGoogle Analytics pane-ins muChinyorwa cheGadziriro yeGadziriro umo iwe unogona kugovera nyore nyore kutumira spam. Iva nechokwadi chokuti wakatsvaga kuti ubvise zvinotumirwa neA analytics uye zvakabvisa zvose zvinoshungurudzwa kubva kuGoogle Analytics nhoroondo.
Zvinosuruvarisa kuti vashambadzi vanoenderera mberi vachiuya nenzira dzakanakisisa uye dzinobatsira dzekugawana, asi hapana chinotinetsa pamusoro. Icho chikamu chebasa rako kuti uzvibvise uye ugare uchigadzira mafiritsi apo nzvimbo dzinoshandiswa dzinogona kuwedzerwa nguva dzose. Unofanirwa kuyeuka kuti hakuna humwe-huwandu-hunokodzera-yose yekugadzirisa kubvisa referrer spam nekusingaperi, asi iwe unogona kubvisa, kuona nekuvandudza iwo nekugadzirisa zvirongwa muGoogle Analytics account. Kana iwe wakambotambira kutumira spam muGoogle Analytics account, iwe unofanirwa kuumba mafaira.